July Dream: Heros on Dec 29
နှစ်သစ်ကူးခါနီး ဆောင်းမနက်ခင်းမှာ အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးတဲ့ ကြောက်လန့်စရာ သဘာဝဘေးဆိုးတခု ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်လာမယ်လို့ ဘယ်သူက ကြိုသိထားခဲ့မလဲ။ ၂၀၁၂ ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း တရွေ့ရွေ့ ချဉ်းကပ်လာလို့ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား ဆိုပြီး ဘယ်သူကမှလည်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေမယ် မထင်ပါဘူး။ တစ်တစ်တူးလို မိုးပြိုမှာစိုးလို့ ခြေနှစ်ချောင်း ထောင်ပြီး အိပ်မယ့်သူတွေလည်း မရှိလောက်ပါဘူး။
မီး... မီး... ကားတွေ ထွက် ကားတွေထွက်... လို့ဆော်သြောသံ အော်သံကြားတော့ မီးသတ်စခန်းက မီးသတ်ရဲဘော်တွေ အိပ်ယာထဲက ထသူထ... ယူနီဖောင်း ကပျာကယာလဲ... ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းပြီး မီးသတ်ကားပေါ်ကိုပဲ အလုအယက် တက်ခဲ့ကြမှာပါ။ နောက်နှစ်ရက်ဆိုရင် Happy new year 2012 လို့ အော်ပြီး နှစ်သစ်ကူးညကို ပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွှဲလိုက်အုံးမယ်လို့ အိပ်ယာမဝင်ခင် စိတ်ကူးထဲမှာတော့ အဲဒီလို အတွေးလေးတွေ ရှိနေမှာပေါ့။
ဒီဘဝမှာ ဒီမျှနဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းတခု ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကြိုများ သိထားနိုင်မှာလည်း မဟုတ်တဲ့ သူတို့တတွေ... မိဘဆွေမျိုး သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကို နှုတ်ဆက် စကားလေးတောင် ပြောခွင့် မရခဲ့လိုက်ပါဘူး။ တာဝန်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ချက်ချင်း ကားပေါ်တက် မီးသတ်ဖို့ မကြောက်မရွံ့ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အများပြည်သူအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့ရတယ်။ Happy new year 2012 လို့ အော်ခွင့် ပျော်ခွင့် မကြုံလိုက်ဘူး။
မီးသတ်သမားမို့ မီးသတ်ရတာ မဆန်းပါဘူး။ သူ့ဆန်စားမှ ရဲရပြီပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အသက်ကို ဖက်နဲ့ ထုပ်ထားရတဲ့ ဘဝမျိုးမှာ တာဝန်ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ရင်မှာပိုက်ပြီး မီးနဲ့ အနီးဆုံးနေရာကနေ မီးအပူခံပြီး သက်စွန့်ဆံဖျား မီးငြိမ်းသတ်ရတာ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်ပါတယ်။ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်ပါတယ်။ မီးလောင်ပြင်မှာ ပစ္စည်းကိရိယာ မပြည့်မစုံနဲ့ ရန်သူမီးကို စစ်ခင်းရတာကို စဉ်းစားကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ထိ အန္တရာယ်များလဲ ဆိုတာ ချက်ချင်း သိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အသံတိတ် သူရဲကောင်းလို့ ကျွန်တော် တင်စားခဲ့ဖူးတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်တွေ... အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းကြပါစေ... အချိန်မတန်ခင် ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ သားကောင်းရတနာတွေ ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်း မြို့စောင့်တပ်တခုဖြစ်တဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးလာအောင် အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါလို့လည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ရင်ကို ထိခတ်တဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတခုကိုလည်း မှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါရစေ။
တာမွေမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ဒုတပ်ကြပ် သီဟမျိုးမှာ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရရှိခဲ့၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဌာနတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် သတိလစ် မေ့မျောနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆေးရုံသို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ကူညီလှူဒါန်းခဲ့သူများက ဒုတပ်ကြပ် သီဟမျိုးမှာ ၁၀ နာရီကျော်ကြာ သတိလစ်မေ့မျောနေရာမှ ယနေ့ညနေ ၃ နာရီ ၂၀ မိနစ်ဝန်းကျင်တွင် ယောင်ရမ်း၍ စကားတစ်ခွန်း ပြောသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြသည်။
ကိုယ်တိုင်သတိလစ်နေမေ့မျောနေသော်လည်း မီးလောင်မှုအတွက် ရတက်မအေးနိုင်ဘဲ ၁၀ နာရီကျော်အတွင်း ၎င်း၏ပြောစကားကြောင့် များစွာ စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းရကြောင်း ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှု လှူဒါန်းသော အလှူရှင်တစ်ဦးကပြောသည်။
Posted by JulyDream at 10:49 PM
Labels: Article, Emotions, Photo
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ အမြန်ဆုး ပြန်ကျန်းမာပာစေ။ အသက်ပေးသားသူတေလည်းကောင်းရာသုကတိရောက်ကြပာစေ
Sorry for wrong typo, keyboard is sth wrong.
ဒီဇင်ဘာ(၂၉ )ရက် တစ်မနက်မှာ
သက်စွန့်ဆံဖျား နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် သင်စွမ်းဆောင်ရင်း
ေ ကာ င်းရာ ဘုံ တွ င် လားစေ သော်...
အားလုံး ကောင်းရာသုဂတိ လားကြပါစေ။ မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အသက်ပေးသွားကြတာဆိုတော့ သူတို့အတွက် ဂုဏ်မငယ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာလေ။
ဒီနေ့ထိလဲ စိတ်မကောာင်း ဖြစ်နေတုန်းပဲ...
Balloon of wishes
30 Things to stop doing yourself
Congratulations Chew Yinn